Ho an'ny orinasa mpiaro ny afo, mpamatsy - Sina ho an'ireo mpamokatra fiarovana
Straineran'ny harona sy tototra
Fako sy fandroahana fandroana
Fako fandroana adidy maivana
Flanges ny tatatra sy ny kabine
Fako fandroana fandroana
Fidirana fidirana sy vavahady
Fitaovana GRD ara-barotra
Sidewall / Ceilingers GRD
Paompy fanesorana condensate
Grilles miverina amin'ny valiny
Famatsy sy fiverenana voaroaka
Ho an'ny fiarovana afo
Fitaovana sy fametahana
Ho an'ny fantson-drano
Laharam-pahamehana amin'ny kalitao
Diffuser momba ny gorodona aluminium
Wood fisoratana anarana Flushmount gorodona fisoratana amin'ny Steel A ...
Fisoratana an-tsoratra plastika avo lenta fisoratana anarana ABS White a ...
Wood fisoratana anarana Oak Floor Louvered Register solid Oak
Steel Baseboard miverina Air Grille White
Fitaovana-Air-Deflector-ho an'ny gorodona fisoratana-PC-sy-PS
Cork sy Paded Ribbed
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny bosoa sy ny fonosana misy tadiny dia manome atiny ambony indrindra sy fanamafisam-peo. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia. Ankoatr'izay, mora ny fametrahana an-tsaha.
Copper plated Swivel Ring Hanger ho an'ny Tube Copper
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny mpangalatra peratra volo vita amin'ny varahina dia nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao, indrindra any Amerika Avaratra. Ary azo namboarina arakaraka ny zavatra takinao izy ireo, ohatra, afaka namboarina tamin'ny rubber, insert na ampinga. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: efa vita mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Fantsom-baravarana amin'ny fantsika amin'ny fehikibo
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny fametahana fantsika misy kodiarana dia ampiasaina amin'ny fametrahana paompy amin'ny rindrina, valindrihana ary gorodona. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Eropa, Moyen Orient ary Azia. Ary koa, ny velaran'ny fifandraisana amin'ny faribolana ambony sy ambany dia misy gazy plastika roa ao anatiny.
Fivoriambe fanohanana amin'ny paipa azo ovaina
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana tena mifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny fivondronan'ny mpanohana fantsom-bola azo ovaina dia natao hanohanana ny fantsona marindrano avy amin'ny stancion izay ilaina ny fanitsiana mitsangana. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy, indrindra tany Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: efa vita mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Ventilation Steel Pipe Clamp miaraka amin'ny EPDM Rubber Lining
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra ny orinasa, ny fantson-tsolika vy mifofofofo miaraka amina firakotra vita amin'ny fingotra EPDM dia noforonina tamin'ny clamp roa miaraka amina hidy roa. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Eropa, sy Azia. Ary koa, ny firakotra fingotra EPDM dia ampiasaina amin'ny insulateur.
Metaly vy sy valida
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra ny orinasa, ny vy sy ny tadiny dia vita amin'ny takela-by mifatotra eo anelanelan'ny tadiny. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia. Ankoatr'izay, izy ireo dia natao ho an'ny fahafaha-mavesatra be.
Hodi-tady fihodinana voatanisa UL & FM voatanisa miaraka amin'ny nilahatra nahatsapa
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, dia nahazo fankatoavana ny UL & FM izahay. Nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra. Ary koa, izy ireo dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao, ohatra, afaka namboarina tamin'ny fingotra, insert na ampinga. Ary misy fitsaboana isan-karazany noho ny safidinao: vita mialoha mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny fantsom-pantsika dia ampiasaina amin'ny fametrahana paompy amin'ny rindrina, valindrihana ary gorodona. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Eropa, Moyen Orient ary Azia. Ary koa, ny velaran'ny fifandraisana amin'ny faribolana ambony sy ambany dia misy gazy plastika roa ao anatiny.
Fivoriambe fanohanana amin'ny paompy azo ovaina miaraka am-bolt
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana tena mifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny fivondronan'ny mpanohana fantsom-bola azo ovaina miaraka amina U-bolt dia natao hanohanana ny fantsona marindrano avy amin'ny stanchions izay ilana fanitsiana mitsangana. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy, indrindra tany Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: efa vita mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Galvanized Ventilation Pipe Clamp amin'ny fingotra
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny fantson-tsolika fantson-drivotra vita amin'ny rivotra dia natao ho an'ny rafitra fanidiana haingana. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Eropa sy Azia. Ary koa, ny firakotra fingotra EPDM dia ampiasaina amin'ny insulateur.
41 * 21 C-Channel ho an'ny rafitra fantsom-by Steel Channel miaraka amina lava-lava
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny c-fantsontsika dia ampiharina amin'ny fahafaha-manao maro hanangona ny fametahana. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Eropa, Moyen Orient ary Azia. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: efa vita mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
Tavy mavesatra J-Hanger Strap Pipe iray
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny j-hangers mavesatra anay dia nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao, indrindra tany Amerika Avaratra. Ary koa, izy ireo dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao, ohatra, afaka namboarina tamin'ny fingotra, insert na ampinga. Ary misy fitsaboana isan-karazany noho ny safidinao: vita mialoha mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
12345 Manaraka> >> Pejy 1/5
Adiresy: Lingang Industrial Zone, Xizhou Town, County Xiangshan, Ningbo City, faritany Zhejiang, Sina
Telefaona: +86 574 6584 8998
RIVOTRA MADIO: braden.chen@ningborunner.com